Keramas amoron-dranomasina any Bali. Indonezia " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Keramas amoron-dranomasina any Bali. Indonezia
Keramas amoron-dranomasina any Bali
Topimaso momba ny morontsiraka Keramas any Bali
Ny morontsirak'i Keramas any Bali dia any amin'ny faritra atsimo atsinanana, tsy lavitra an'i Sanur ary ny morontsiraka akaiky an'i Ubud.
Ny marika fototra amin'ity morontsiraka ity dia hevitra roa:
Tora-pasika goavambe misy fasika mainty tsara tarehy
Milalao onja tsara indrindra any Bali
Io no iray amin'ireo morontsiraka tsara indrindra eto Bali. Keramas dia mirehareha amin'ny fotodrafitrasa tsara: misy bar, club, hotely maromaro ary dolphinarium. Ny vohitra dia misy manodidina ny morontsiraka.
Ny halaviran-dranomasina dia manana halava be ary mivoaka maromaro ho azy. Matetika dia vitsy mponina. Ankoatry ny surf sy ny mpanaraka ny fandinihana ny ranomasina misaintsaina dia saika tsy misy mpizahatany eto.
Surf on Keramas
Ny mampiavaka an'i Keramas dia ity morontsiraka ity rakotra fasika mainty sy sira, mamirapiratra amin'ny masoandro, toy ny kintana miparitaka. Misy vatokely boribory boribory marobe koa eny amoron-dranomasina.
Ny mponina amin'ny tanàna manodidina dia manangona azy ho fitaovana amin'ny famokarana asa tanana isan-karazany, ary koa amin'ny fametrahana ny rindrin'ny tranobe sy ny fefy. Amin'ny toerana maro, vatolampy goavambe no tena akaikin'ny morontsiraka. Amin'ny riandrano ambany dia azonao jerena ireo faritra midadasika mitsiriritra avy ao ambanin'ny rano, rakotra ahidrano maitso malefaka.
Ny haavon'ny ranomasina any Keramas dia manambara amin'ny toerana any ambany rakotra ahidrano maitso.
Keramas dia morontsiraka tsy feno olona, ​​saingy misy fotodrafitrasa mandroso eto. Ny ankamaroan'ny mpitsidika dia mijanona eto mandritra ny iray andro mahery. Ny mpisitrika dia matetika tara.
Ny onja akaikin'ity morontsiraka ity dia avo dia avo, ary misy haran-dranomasina eo akaikin'ny morony. Milomano eto dia tena mampidi-doza ary tsy azo antoka.
Zavatra tokony hatao eny amoron-dranomasina
Mandehandeha, mankafy ny maraina.
Fitsidihana trano fisakafoanana, fisotroana ary klioba.
Mijery fampisehoana dolphin, milomano miaraka amin'izy ireo ao amin'ny dolphinarium.
Maimaimpoana ny fiantsonan'ny bisikileta.
Eo am-baravarana dia mipetraka ny olona eo an-toerana ary manondro amin'ny fomba malefaka fa voaloa ny fidirana. Fa raha mandeha mahitsy any amin'ny promenade amoron-dranomasina ianao "nefa tsy mahamarika azy ireo", dia ho afaka ny fidirana
Ny Keramas Beach dia eo amin'ny morontsiraka atsimo atsinanan'i Bali. Ary io no morontsiraka akaiky indrindra an'i Ubud. (antsasak'adiny bisikileta)
adiresy: Jl. Pantai Keramas No. 80551, Keramas, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali, Indonezia
mandrindra: -8.599247, 115.337718
Tranonkala amoron-dranomasina: keramas-beach.business.site
Keramas amoron-tsiraka amin'ny sari-tanin'i Bali
Keramas amoron-tsiraka amin'ny sarintany satelita any Bali
Sarin'ny morontsirak'i Keramas any Bali
Fasika mainty any Bali
Ny halavan'ny morontsiraka Keramas dia kilometatra maromaro